एक सातामा ५८ वटा टिभिएस मोटरसाइकल बिक्यो ! - Nayabulanda.com
एक सातामा ५८ वटा टिभिएस मोटरसाइकल बिक्यो !
नयाँ बुलन्द ९ आश्विन २०७६, बिहीबार १५:४३ 241 पटक हेरिएको
इलाम : इलाममा एक सातामा ५८ वटा टिभिएस कम्पनीका मोटरसाइकल बिक्रि भएका छन् । टिभिएस इलामका लागि आधिकारिक डिलर डिजी ट्रेड इलामले सो संख्यामा मोटरसाइकल विक्रि गरेको हो ।
एक सातामा ५८ वटा मोटरसाइकल विक्रि गरेको इलामका लागि पहिलो रेकर्ड नै भएको डिजी ट्रेड इलामका प्रोपाइटर दिलिप पौडेको भनाई छ । अन्य कुनै कम्पनीले पनि सात दिनको अवधिमा नै सो संख्यामा हाल बेच्न नसकेको उनको दावी छ ।
विजया दशमीलाई लक्षित गरि डिजी ट्रेड इलामले मेघा एक्सचेन्ज क्याम सञ्चालन गरेको छ । साथै जगदम्वा मोर्टसले देशका मुख्य मुख्य सहरहरुमा स्वस्थ्यका लागि रमाइलो दौड र स्टन सो साथै मार्केटिङ गरेको डिजी ट्रेड इलामका प्रोपाइटर पौडेलले वताए ।
उनका अनुसार अजोज २ बाट ८ गते सम्म सञ्चालित मेगा एक्सेजचले ४६ वटा एक्चेन्ज गरेको र १२ वटा विबिm गरेको हो । जगदम्बा टिभिएसका मार्केटिङ मेनेजर सहितको टोली इलाम आएर नै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । एक्सचेन्जमा शुन्य प्रतिशत फाइनास, थप मुल्यांकन १५ हजार देखि ३० हजार, जस्तो सुकै गुड्ने नगुडने पुरानो बाइक लिई ३० हाजर मुल्यांकन, दशै अफर सञ्चालन गरिएको उनले वताए ।
५ वर्ष वारेन्टी, अत्यातै बलियो, क्वीकपीकअफ साथै आकर्षक मोडलहरुमा उपलव्ध भएका कारणले टिभिएस इलामे युवाको रोजइमा परेको उनी वताउँछन् । टिभिएस कम्पनीले मोटरसाइकलको भिडमा अलग्गै पहिचान बनाएको छ ।